बिश्व कृतिमान राख्न सफल ; साहासी खेलाडी तथा मोडल गौतम खाति – Ramro Sandesh बिश्व कृतिमान राख्न सफल ; साहासी खेलाडी तथा मोडल गौतम खाति – Ramro Sandesh
बिश्व कृतिमान राख्न सफल ; साहासी खेलाडी तथा मोडल गौतम खाति
Posted on May 17, 2020 /2हप्ता अगाडी / 403 Viewed
काभ्रेपलान्चोक – २०७५ सालमा कराँते ब्ल्याक बेल्ट ड्रेस लगाएर १५:००० फिट आकाश माथी हेलिकप्टर बाट स्काई ड्राइभ गरि बिश्व कृतिमान राख्न सफल महोत्तरी जिल्लाको भरतपुर – ४ मा जन्मनुभएको बिश्व कृतिमान राख्न सफल एडभेन्चर , खेलाडी तथा मोडल गौतम खाति आज भोलि देश नै कलडाउनका कारण घर तिर परिवारसँग हुनुहुन्छ । एडभेन्चर , कराँते , मोडलिङ , अभिनय , फिल्म मेकिङमा रुचि भएको बिश्व कृतिमान राख्न सफल गौतम खाति सबै लाई सहयोग गरौं भन्ने भावनाको हुन्छ । प्रस्तुत छ नव क्षितिज साप्ताहिकका लागि अरबिन्द्र गौतमले बिश्व कृतिमान राख्न सफल एडभेन्चर , खेलाडी तथा मोडल गौतम खातिसँग गरेको विशेष कुराकानी ;
० देश नै लकडाउन अवस्थामा छ समय कसरी बिताउदै हुनुहुन्छ ?
अहिले घरमा नै परिवारसँग बसेर दिनहरु बिताउदै छु । कोरोना भाइरस कोभिड – १९ को रोकथामका लागि लकडाउन हुनु भन्दा पहिला धेरै ब्यस्त थियो । तर अहिले लकडाउन पछि परिवारसँग बसेर एक अर्काको सुख दुखको कुराकानी साटासाट गर्न मौका मिलेको छ ।
० यस्तो संकटको घडीमा कलाकारहरुको देश प्रति भुमिका के रहन्छ ?
यस्तो संकटको घडीमा कलाकारहरुले आम सबै नागरिकहरु लाई कोरोना बाट बच्न सबै क्षेत्रबाट बच्न सचेत गराउनु पर्छ । र दुख पाएका दैनिक ज्यालादारी काम गर्न मजदुरहरुलाइ गुजारा चलाउन समस्य हुने हरुलाइ राहत स्वरुप आ – आफ्नो ठाउँ बाट सकेको सहयोग गर्नले सबै मजदुर लाई राहत हुने थियो ।
० कलाकारितामा प्रवेश गरेको कति भयो ? यो भन्दा पहिला के गर्नु हुन्थ्यो ?
यो क्षेत्रमा प्रवेश गरेको जम्मा तीन वर्ष भयो कलाकारिता संग संगै म काठमाडौ उपत्यकाको विभिन्न स्कुलहरुमा कराँते प्रशिक्षण गराउछु। त्यसको आलाब विभिन्न जिल्लाको एडभेन्चर ट्राभल र एडभेन्चर स्पोर्ट्सको डकुमेन्ट्री निमार्ण र निर्देशन गरिसकेको छु।
० तपाईं कराँतेको कुशल खेलाडी र प्रशिक्षक हुन्छ ! यो सँग सँगै विश्व रेकर्ड पनि राख्नु भएको छ होइन ?
हजुर २०७५ सालमा कराँते ब्ल्याक बेल्ट ड्रेस लगाएर १५००० फिट आकासको हेलिकप्टरबाट स्काई डाईभ गरि विश्व किर्तिमान काएम गरे र त्यसको अलाबा नेपालको अरु साहासि खेल जस्तै÷बन्जि जम्प,प्यारा गलडिङ्ग,हर्ष राईड,क्लाईबिङ्ग,आदि गरि सकेको छु ।
० डकुमेन्ट्री कति वटा निर्माण गरि सक्नु भयो ?
एडभेन्चर ट्राभल र एडभेन्चर स्पोर्ट्स गरि जम्मा ६४ वटा डकुमेन्ट्रीको निमार्ण गरि सकेको छु।
० कलाकारिता क्षेत्रमा कसरी लाग्नु भयो ?
विश्व रेकर्ड र डकुमेन्ट्रीको छायांकन गर्ने क्रममा कलाकारिता क्षेत्रको मान्छे संग धेरै चिनजान र भेटघाट भयो। त्यसै पनि क्यमेरा फेस गर्नि बानि परि सकेकोले संगित र म्युजिक भिडियो तिर लागे ।
० अहिलेसम्म कति वटा म्युजिक भिडियोमा अभिनय गर्नु भयो ?
बढि समय डकुमेन्ट्रीको छायांकनमा ब्यस्त भएको हुँदा म्युजिक भिडियो २० , २५ वटा गरेको छु। तर सुटिङको क्रम जारि छ।
यी नै क्षेत्र बाट गौतम खाति भनेर चिनिएको छु। आम दर्सकको माया पाएको हुदा म सन्तुटि नै छु।
हाम्रो देशको फिल्म क्षेत्र सानो छ। तर मेहनत गर्दै गयो भने अवसर धेरै आउँछ नत्र बाँच्न कठिन छ।
० तपाईंले अभिनय गरेको सबैभन्दा चर्चाको गित कुन हो ?
मैले अभिनय गरेको चर्चाको म्युजिक भिडियो धेरै छ।तर पछिल्लो समयमा पुष्कर सुनुवार र मेलिना राईको स्वरमा रहेको “लाग्छ तिम्रै आँखा हेरि रहुँ ” जुन म्युजिक भिडियो बाट बेष्ट मोडलको अवार्ड पनि पाएको थिए।
०अब दर्शक श्रोताले हजुरको कुन गित देख्न पाउने छ्न?
अब मेरो अभिनयमा एकै साथ तीन वटा म्युजिक भिडियो आउने तयारीमा छ। गायिका अनु चौधरी को “कुन पाप दण्ड” पुष्कर सुनुवारको “धड्कन” चर्चित नायिका केकि अधिकारी र सिल्पा पोखरेल संग छिट्टै आउँदै छ ।
यो समयको माग हो। समय संगै आफुले आफैलाई परिवर्तन गराउँदै लानु पर्छ। तर हाम्रो नेपाली समाज अनुसार अङ्गै प्रदशन गरेर हैन सृजना र आफ्नो अभिनय प्रदर्सन गरेर चर्चा कमाउन सकिन्छ। जस्तो लाग्छ।
० तपाईंलाई पछि गएर कस्तो नायक तथा मोडल बन्न मन छ ?
हेर्दै जाउ जीवनले कस्तो मोड लिन्छ। तर जीवनमा एउटा राम्रो र असल कलाकार बन्ने चाहाना छ। मेरो अभियानमा यस्तो कलाकारिता झल्कियोस कि आम दर्शक को नकारात्मक सोच नै परिवर्तन गरिदियोस। मोडलको एउटा समय हुन्छ। चल्नको लागि तर कलाकारको कुनै समय र उमेरले कुनै असर पार्दैन आफ्नो सृजना जुन सुकै समयमा पनि पर्दामा देखाउन सकिन्छ। त्यस कारण पछि गएर एउटा सन्देश मुलक चलचित्र मा अभिनय गरेर आम दर्सक माझ आउने छु ।
० भाबी योजना के बनाउनु भएको छ ?
भाविको योजना ७७ वटै जिल्लाको डकुमेन्ट्री छायांकन गर्ने सोच बनाएको छु। जसमा ६४ वटा जिल्लाको डकुमेन्ट्री को छायांकन गरि सके र यो वर्षको अन्तिममा राम्रो चलचित्रको नायकको रुपमा डेन्यु गर्दैछु।
० अन्तमा आम दर्सकलाई के भन्न चाहानु हुन्छ ?
म आम दर्सक लाई के भन्न चाहन्छु भने आज यो स्थान सम्म आउन दर्सक स्रोताको नै हात छ। आगामि दिनहरुमा पनि सबैको यस्तै सनथ सहयोगको अपेक्षा गर्दै आगामी दिनमा म नेपाली लाई एउटा साहासि काम गरेर होस वा कलाकारिता गरेर होस म नेपाल र नेपाली लाई चिनाउन चाहन्छु। यहाँ सम्म पुग्न सबैको सहयोगको अपेक्षा गरेको छु।